5 Echiche efu nke ire ahia na eziokwu | Martech Zone
Fraịde, Septemba 11, 2015 Sọnde, Septemba 13, 2015 Douglas Karr
Anyị na-arụ ọrụ na nkwupụta ugbu a ebe atụmanya ahụ kwuru na ha chọrọ gaa ngwa ngwa. Imirikiti ndị na-ere ahịa ga-eji ihu na-enye ohere iji nweta mbinye aka ngwa ngwa, mana m na-ele ya ugbu a dịka akara ịdọ aka ná ntị. Ga ngwa ngwa na-eduga na atụmanya nke ịnweta na-eduga ngwa ngwa. Ọ bụ ezie na nke ahụ ga-ekwe omume ruo mgbe anyị nyochachara onye ahịa, asọmpi, na ohere ahụ, anyị ejighị n'aka otu anyị ga-esi nweta nsonaazụ ahụ.
Ọ bụ echiche ezighi ezi? Nghahie? Ma obu ikekwe olile anya adighi. Ikekwe ọ bụ njikọta nke ihe niile dị n'elu, mana ire ahịa nwere nnukwu nsogbu. Mgbe ụfọdụ, m na-eche na anyị na-ewetara ya onwe anyị ebe ọ bụ na anyị na-agbakarị ike ịkọwapụta nsonaazụ a na-enweghị atụ na mbara igwe ọ bụla, usoro ma ọ bụ ụlọ ọrụ anyị.
Daalụ ịdị mma maka ndị dị ka Nnukwu ntụpọ nke ahụ na-amata ọtụtụ akụkọ ifo n’ebe ahụ. Ha mepụtara ihe omuma ihe a na nghọta 5, eziokwu na ndụmọdụ iji meziwanye ọ bụla nke ọ bụla:
Adị - 65% nke ọdịnaya mepụtara site na ịzụ ahịa bụ emeghi ere.
Adị - Ihe na-erughị 10% nke mmefu ego ahịa na-aga mgbalị nke ahụ mepụta nsonaazụ ahịa.
Adị - Naanị 24% nke ụlọ ọrụ emeela ka ọ dị mma ahia ahia aka.
Adị - Ngwaọrụ nwere ike mee ka usoro ahịa gị jubiga ókè mebie mmefu ego gị.
Adị - 28% nke ọdịnaya bụ achọtaghi na ire ahịa na-etinye 31% nke oge ha n'ịchọ ya!
Jide n'aka na ị ga-enweta ndụmọdụ ndị Highspot na-enye na infographic ha:
The Nnukwu ntụpọ ikpo okwu nkwalite ahia na ejikota ndi oru ahia na ihe di nkpa maka onodu obula, na enye uzo di iche iche iji chee ndi ahia ahia, ma naputa ezi okwu oge ma ndi ahia gha achoghari ọdịnaya. Nke di elu nchịkọta na-enye nghọta dị mfe ka enwee ike ịmetụta ọkwa na ọdịnaya.
Tags: ahia na ire ahianghọtanghọta na eziokwunghọta na eziokwueziokwuire ahia na ire ahiaire na ire ahịaọdịnaya ahịa
DivvyHQ: Nnukwu Mpịakọta Ọdịnaya na Ọdịnaya